အာရမ္မဏပစ္စယော Ārammaṇapaccayo ( Stimulative Causes ) 1 – Dhamma Training Center
အာရမ္မဏပစ္စယော Ārammaṇapaccayo ( Stimulative Causes ) 1
အာရမ္မဏပစ္စယော Ārammaṇapaccayo ( Stimulative Causes ) 1 Zawgyi
၄၀၄။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အာရမ္မဏပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁)
Kusalo dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo.
ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား အာရမ္မဏပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ဒါနံ ဒတွာ သီလံ သမာဒိယိတွာ ဥပေါသထကမ္မံ ကတွာ တံ ပစ္စဝေက္ခတိ၊
Dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati.
အလှူဒါနပေး၍၊ ငါးပါးသီလဆောက်တည်၍၊ ရှစ်ပါးသောဥပုသ်သီလကို ဆောက်တည်၍၊ ထိုထိုဒါန၊ သီလနှင့် ရှစ်ပါးသော ဥပုသ်သီလဟူသော ကာမာဝစရကုသိုလ်ကို ဆင်ခြင်၏။
ပုဗ္ဗေ သုစိဏ္ဏာနိ ပစ္စဝေက္ခတိ၊ ဈာနာ ၀ုဋ္ဌဟိတွာ ဈာနံ ပစ္စဝေက္ခတိ၊
Pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati.
ရှေးကပြုလုပ်ခဲ့သော ထိုထိုပြုပြုသမျှသော ဒါန၊ သီလနှင့် ရှစ်ပါးသောဥပုသ်သီလတို့ ပါဝင်သော ကာမာဝစရ ကုသိုလ်တရားတို့ကို အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်၏။ ဈာန်ဝင်စားပြီးနောက် ဈာန်မှထမြောက်၍ ၀င်စားပြီးသောဈာန်ကို ဆင်ခြင်၏။
(က-၁) Arammana Paccaya (Object support condition ) “Arammana” meaning isaplace where people take delight, like an amusement park oragarden or something like that. It is called Arammana. As an amusement park has delightful power, the six objectsalso has delightful force so our minds are always delighting in the great object-garden. That is one meaning of the word “Arammana”.
(က-၂) အာရမ္မဏ = အာရုံ။ အာရမ္မဏကို တောင်ဝှေးကြိုးတန်းနှင့် ပမာပြုကြပါသည်။ စိတ် စေတသိက်တို့၏ အာရုံကို တောင်ဝှေးနှင့်တူပြီး၊ ရုပ်၏အာရုံကို ကြိုးတန်းနှင့်တူကြောင်း ပြဆိုတော်မူကြသည်။ စိတ်သည် အာရုံနှင့်ကင်း၍ ၁-မိနစ်၊ ၁-စက္ကန့်ပင် နေမရပါ။ အိပ်ပျော်နေစဉ်၌သော်လည်း ကံ၊ ကမ္မနိမိတ်၊ ဂတိနိမိတ် တစ်ပါးပါးကို အာရုံပြု၏။
(က-၃) အာရုံခြောက်ပါးရှိသည်။ ၁-ရူပါရုံ (အဆင်းအာရုံများ)၂-သဒ္ဒါရုံ (အသံအာရုံများ) ၃-ဂန္ဓာရုံ (အနံ့အာရုံများ) ၄-ရသာရုံ (စားဖွယ် သောက်ဖွယ် အရသာအာရုံများ) ၅-ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ (အထိအတွေ့အာရုံများ) ၆-ဓမ္မာရုံ (ရူပါရုံ၊ သဒ္ဒါရုံ စသည် အာရုံငါးပါးမှအပ အခြားအာရုံများသည် ဓမ္မာရုံမည်၏)
(က-၄) လှပသောဥယျာဉ်သည် လူ၏စိတ်ကို စွဲဆောင်သကဲ့သို့ ရူပါရုံ စသည့် အာရုံခြောက်ပါးသည်လည်း စိတ် စေတသိက်တို့၏ မွေ့လျော်ဖွယ်ရာ ဖြစ်၏။
(က-၅) အာရုံခြောက်ပါးက စားကျက်ဖြစ်၏။ စားကျက်၌ ကုသိုလ် အကုသိုလ်ဟူ၍ မရှိပါ။ နာမ်တရားဖြစ်သည့် ကုသိုလ် အကုသိုလ် ဟိတ်အုပ်စုနှစ်ခု၌သာ ကုသိုလ် အကုသိုလ် ရှိသည်။
(က-၆) စားကျက်ဖြစ်သည့် အာရုံက လူမိုက် လူလိမ္မာ လူချမ်းသာ လူဆင်းရဲ ရှင်ဘုရင် သူတောင်းစား အားလုံးအတွက် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။
သေက္ခာ ဂေါတြဘုံ ပစ္စဝေက္ခန္တိ၊
sekkhā gotrabhuṃ paccavekkhanti.
ကျင့်ဆဲဖြစ်သော သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်ဟူသော အရိယာသေက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သောတာပတ္တိမဂ်၏ရှေ့ ပုထုဇဉ်အနွယ်ကို လွှမ်းမိုးဖျက်စီးတတ်သည့် ဂေါတြဘူကို ဆင်ခြင် သုံးသပ် ကြကုန်၏။
သကဒါဂါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်၏ရှေ့ ကိလေသာမှဖြူစင်ခြင်း ဝေါဒါန်ကို ဆင်ခြင်သုံးသပ် ကြကုန်၏။
သေက္ခာ မဂ္ဂါ ၀ုဋ္ဌဟိတွာ မဂ္ဂံ ပစ္စဝေက္ခန္တိ၊
Sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti.
ကျင့်ဆဲဖြစ်သော အရိယာ သေက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မိမိတို့ဆိုင်ရာ သောတာပတ္တိမဂ်၊ သကဒါဂါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်မှ ထမြောက်၍ မိမိဆိုင်ရာဆိုင်ရာ မဂ်ကို ပစ္စဝေက္ခန္တိ ဆင်ခြင် သုံးသပ်ကြ၏။
သေက္ခာ ၀ါ ပုထုဇ္ဇနာ ၀ါ ကုသလံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ၀ိပဿန္တိ၊
Sekkhā vā puthujjanā vā kusalaṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti.
ကျင့်ဆဲဖြစ်သော သေက္ခာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ ပုထုဇဉ်ယောဂီ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် လည်း ကောင်း၊ ကုသိုလ်တရားကို မမြဲအနိစ္စ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ အစိုးမရ အနတ္တဟု ၀ိပဿနာရှုကြ၏။
စေတောပရိယဉာ‌ဏေန ကုသလစိတ္တသမင်္ဂိဿ စိတ္တံ ဇာနန္တိ။
Cetopariyañāṇena kusalacittasamaṅgissa cittaṃ jānanti.
သူတစ်ပါး၏စိတ်ကို သိနိုင်စွမ်းသော စေတောပရိယအဘိညာဉ်ဖြင့် ကုသိုလ်စိတ်နှင့် ပြည့်စုံသော ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်ကို သိကြကုန်၏။
အာကာသာနဉ္စာယတနကုသလံ ၀ိညာဏဉ္စာယတနကုသလဿ အာရမ္မဏပစ္စယေန ပစ္စယော။
Ākāsānañcāyatanakusalaṃ viññāṇañcāyatanakusalassa ārammaṇapaccayena paccayo.
ဤဘ၀၊ ရှေးဘ၀ မိမိအဇ္ဈတ္တသန္တာန်၌ ဖြစ်ဖူးသော အာကာသကသိုဏ်းကို ရှုပွား၍ ရရှိသော အာကာသာနဉ္စာယတန ကုသိုလ်စိတ်သည် ဖြစ်ပေါ်ဆဲ ၀ိညာဏဉ္စာယတနကုသိုလ်စိတ်အား အာရမ္မဏပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
အာကိဉ္စညာယတနကုသလံ နေ၀သညာနာသညာယတနကုသလဿ အာရမ္မဏပစ္စယေန ပစ္စယော။
Ākiñcaññāyatanakusalaṃ nevasaññānāsaññāyatanakusalassa ārammaṇapaccayena paccayo.
ဤဘ၀၊ ရှေးဘ၀ မိမိသန္တာန်၌ ဖြစ်ဖူးသော မရှိပညတ် နတ္ထိဘောပညတ်ကို အာရုံပြု၍ ဖြစ်သော အာကိဉ္စညာယတန ကုသိုလ်စိတ်သည် အမှတ်သညာ ရှိသည်လည်းမဟုတ်၊ မရှိသည်လည်း မဟုတ်ဟု သိစွမ်းနိုင်သော နေ၀သညာနာသညာယတန ကုသိုလ်စိတ်အား အာရမ္မဏပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ကုသလာ ခန္ဓာ ဣဒ္ဓိဝိဓဉာဏဿ စေတောပရိယဉာဏဿ ပုဗ္ဗေနိဝါသာနုဿတိဉာဏဿ ယထာကမ္မူပဂဉာဏဿ အနာဂတံသဉာဏဿ အာရမ္မဏပစ္စယေန ပစ္စယော။
Kusalā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
ကုသိုလ်ဖြစ်သော နာမ်ခန္ဓာတို့သည် တန်ခိုးအမျိုးကို ဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်းသော ဣဒ္ဓိဝိဓဉာဏ်အား လည်းကောင်း၊ သူတစ်ပါးစိတ်ကို သိနိုင်စွမ်းသော စေတောပရိယဉာဏ်အားလည်းကောင်း၊ ဖြစ်ခဲ့ ဖူးပြီးသော ဘ၀အဆက်ဆက်ကို သိနိုင်စွမ်းသော ပုဗ္ဗေနိဝါသာနုဿတိဉာဏ်အားလည်းကောင်း၊ ပြုခဲ့ပြီးသော ကံအမျိုးမျိုးကို သိနိုင်စွမ်းသော ယထာကမ္မူပဂဉာဏ်အားလည်းကောင်း၊ နောင် အနာဂတ်၌ ဖြစ်နိုင်သည်တို့ကို သိနိုင်စွမ်းသော အနာဂတံသဉာဏ်အားလည်းကောင်း အာရမ္မဏ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည်။
၄၀၅။ ကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ အာရမ္မဏပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ အကု-၂)
Kusalo dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo.
ကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ်တရားအား အာရမ္မဏပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
ဒါနံ ဒတွာ သီလံ သမာဒိယိတွာ ဥပေါသထကမ္မံ ကတွာ တံ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ အာရဗ္ဘ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ၀ိစိကိစ္ဆာ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဥဒ္ဓစ္စံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒေါမနဿံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။
Dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati.
အလှူဒါနကိုပေး၍၊ သီလဆောက်တည်၍၊ ရှစ်ပါးသောဥပုသ်သီလကို ဆောက်တည်၍ ထိုထိုဒါန၊ သီလနှင့် ရှစ်ပါးသောဥပုသ်သီလဟူသော ကာမာဝစရကုသိုလ်တို့ကို အဿာဒေတိ သာယာ မြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိ အလွန် နှစ်သက် ကြည်နူး၏၊ ထို သာယာ မြတ်နိုး နှစ်သက် ကြည်နူးမှုကို အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှုရာဂ ဖြစ်ပေါ်လာ၏၊ အယူလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိ ဖြစ်ပေါ်လာ၏၊ ယုံမှားသံသယ ၀ိစိကိစ္ဆာဖြစ်ပေါ် လာ၏၊ စိတ်ပျံ့လွင့်ခြင်း ဥဒ္ဓစ္စဖြစ်ပေါ်လာ၏၊ စိတ်နှလုံး မသာယာခြင်း ဒေါမနဿ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။
ပုဗ္ဗေ သုစိဏ္ဏာနိ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ အာရဗ္ဘ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ၀ိစိကိစ္ဆာ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဥဒ္ဓစ္စံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒေါမနဿံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။
Pubbe suciṇṇāni assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati.
ရှေး၌ ကောင်းစွာ လေ့ကျက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကုန်သော ထိုထိုဒါန၊ သီလနှင့် ရှစ်ပါးသော ဥပုသ်သီလ ဟူသော ကာမာဝစရကုသိုလ်တို့ကို သာယာမြတ်နိုး၏၊ အလွန် နှစ်သက် ကြည်နူး၏၊ ထိုသာယာ မြတ်နိုး နှစ်သက်ကြည်နူးမှုကို အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှုရာဂ ဖြစ်ပေါ်လာ၏၊ အယူလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိ ဖြစ် ပေါ်လာ၏။ ယုံမှားသံသယ၀ိစိကိစ္ဆာ ဖြစ်ပေါ်လာ၏၊ စိတ်နှလုံးမသာယာမှု ဒေါမနဿ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။
(ခ-၁) အဿာဒေတိ၊ အဘိနန္ဒတိ ဟူသည် ရာဂနှင့်ယှဉ်ပါက အနုစား သာယာနှစ်သက်မှုမျှသာ ဖြစ်သေးသဖြင့် အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိကို မတားဆီးနိုင်မှသာ ]တံ အာရဗ္ဘ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ} ရာဂအထိ ဖြစ်ကြောင်းကို ပဋ္ဌာန်း သိပ္ပံဆရာတော်ကြီးက ဥပမာဖြင့် မိန့်တော်မူပါသည်။
(ခ-၂) မီးပြင်းတိုက်ထားသည့် သံဒယ်အိုးအလွတ်ထဲကို အသားတုံးတစ်တုံး ပစ်ထည့်လိုက်ပါက ရှဲကနဲအသံကြားရပြီး အိုးနှင့်အသားတုံး ကပ်၍သွားပါမည်။ ထိုအသားတုံးကို သံယောက်မနှင့် ထိုးခွါလျှင်ပင် မရနိုင်တော့ပေ။ ဤဥပမာအတိုင်းပင် အာရုံကို သာယာနှစ်သက်ပါက မစွန့်နိုင်၊ မခွါနိုင် ဖြစ်လာတော့၏။
(ခ-၃) ရူပါရုံအဆင်း၌လည်း တူတူ၊ သဒ္ဒါရုံ အသံ၌လည်း တူတူ၊ ဂန္ဓာရုံအနံ့၌လည်း တူတူ၊ ရသာရုံ အရသာ၌လည်း တူတူ၊ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ အထိအတွေ့အာရုံ၌လည်း တူတူ ကပ်သွားလျှင် ခွါ၍မရတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ]အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ တံ အာရဗ္ဘ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ} ဖြစ်လာပါသည်။
ဈာနာ ၀ုဋ္ဌဟိတွာ ဈာနံ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ အာရဗ္ဘ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ၀ိစိကိစ္ဆာ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဥဒ္ဓစ္စံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။ ဈာနေ ပရိဟီနေ ၀ိပ္ပဋိသာရိဿ ဒေါမနဿံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။
Jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati. Jhāne parihīne vippaṭisārissa domanassaṃ uppajjati.
လောကီ ကုသိုလ်ဈာန်ဝင်စားခြင်းမှထ၍ ယင်းဈာန်ကို အဿာဒေတိ သာယာမြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိ အလွန် နှစ်သက်၏၊ ထိုသို့ သာယာ မြတ်နိုး နှစ်သက်မှုကို အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှုရာဂ ဖြစ်၏။အယူလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိ ဖြစ်၏၊ ယုံမှားသံသယ ၀ိစိကိစ္ဆာဖြစ်ပေါ်လာ၏၊ စိတ်ပျံ့လွင့်မှု ဥဒ္ဓစ္စဖြစ်၏၊ ဈာန် လျှောကျခြင်းကြောင့် စိတ်နှလုံးမသာယာမှု ၀ိပ္ပဋိသာရိဿ ဒေါမနဿဖြစ်၏။
အာရမ်မဏပစ်စယော Ārammaṇapaccayo ( Stimulative Causes ) Pyidaungsu – Unicode
၄၀၄။ ကုသလော ဓမ်မော ကုသလဿ ဓမ်မဿ အာရမ်မဏပစ်စယနေ ပစ်စယော။ (ကု၊ ကု-၁)
ကုသိုလျတရားသညျ ကုသိုလျတရားအား အာရမ်မဏပစ်စယသတ်တိဖွငျ့ ကြေးဇူးပွု၏။
ဒါနံ ဒတှာ သီလံ သမာဒိယိတှာ ဥပေါသထကမ်မံ ကတှာ တံ ပစ်စဝက်ေခတိ၊
အလှူဒါနပေး၍၊ ငါးပါးသီလဆောကျတညျ၍၊ ရှဈပါးသောဥပုသျသီလကို ဆောကျတညျ၍၊ ထိုထိုဒါန၊ သီလနှငျ့ ရှဈပါးသော ဥပုသျသီလဟူသော ကာမာဝစရကုသိုလျကို ဆငျခွငျ၏။
ပုဗ်ဗေ သုစိဏ်ဏာနိ ပစ်စဝက်ေခတိ၊ ဈာနာ ဝုဋ်ဌဟိတှာ ဈာနံ ပစ်စဝက်ေခတိ၊
ရှေးကပွုလုပျခဲ့သော ထိုထိုပွုပွုသမြှသော ဒါန၊ သီလနှငျ့ ရှဈပါးသောဥပုသျသီလတို့ ပါဝငျသော ကာမာဝစရ ကုသိုလျတရားတို့ကို အာရုံပွု၍ ဆငျခွငျ၏။ ဈာနျဝငျစားပွီးနောကျ ဈာနျမှထမွောကျ၍ ဝငျစားပွီးသောဈာနျကို ဆငျခွငျ၏။
(က-၂) အာရမ်မဏ = အာရုံ။ အာရမ်မဏကို တောငျဝှေးကွိုးတနျးနှငျ့ ပမာပွုကွပါသညျ။ စိတျ စတေသိကျတို့၏ အာရုံကို တောငျဝှေးနှငျ့တူပွီး၊ ရုပျ၏အာရုံကို ကွိုးတနျးနှငျ့တူကွောငျး ပွဆိုတျောမူကွသညျ။ စိတျသညျ အာရုံနှငျ့ကငျး၍ ၁-မိနဈ၊ ၁-စက်ကနျ့ပငျ နမေရပါ။ အိပျပြျောနစေဉျ၌သျောလညျး ကံ၊ ကမ်မနိမိတျ၊ ဂတိနိမိတျ တဈပါးပါးကို အာရုံပွု၏။
(က-၃) အာရုံခွောကျပါးရှိသညျ။ ၁-ရူပါရုံ (အဆငျးအာရုံမြား)၂-သဒ်ဒါရုံ (အသံအာရုံမြား) ၃-ဂန်ဓာရုံ (အနံ့အာရုံမြား) ၄-ရသာရုံ (စားဖှယျ သောကျဖှယျ အရသာအာရုံမြား) ၅-ဖောဋ်ဌဗ်ဗာရုံ (အထိအတှအေ့ာရုံမြား) ၆-ဓမ်မာရုံ (ရူပါရုံ၊ သဒ်ဒါရုံ စသညျ အာရုံငါးပါးမှအပ အခွားအာရုံမြားသညျ ဓမ်မာရုံမညျ၏)
(က-၄) လှပသောဥယြာဉျသညျ လူ၏စိတျကို စှဲဆောငျသကဲ့သို့ ရူပါရုံ စသညျ့ အာရုံခွောကျပါးသညျလညျး စိတျ စတေသိကျတို့၏ မှလြေ့ျောဖှယျရာ ဖွဈ၏။
(က-၅) အာရုံခွောကျပါးက စားကကျြဖွဈ၏။ စားကကျြ၌ ကုသိုလျ အကုသိုလျဟူ၍ မရှိပါ။ နာမျတရားဖွဈသညျ့ ကုသိုလျ အကုသိုလျ ဟိတျအုပျစုနှဈခု၌သာ ကုသိုလျ အကုသိုလျ ရှိသညျ။
(က-၆) စားကကျြဖွဈသညျ့ အာရုံက လူမိုကျ လူလိမ်မာ လူခမျြးသာ လူဆငျးရဲ ရှငျဘုရငျ သူတောငျးစား အားလုံးအတှကျ အတူတူပငျ ဖွဈသညျ။
သက်ေခာ ဂေါတွဘုံ ပစ်စဝက်ေခန်တိ၊
ကငျြ့ဆဲဖွဈသော သောတာပနျ၊ သကဒါဂါမျ၊ အနာဂါမျဟူသော အရိယာသက်ေခာပုဂ်ဂိုလျတို့သညျ သောတာပတ်တိမဂျ၏ရှေ့ ပုထုဇဉျအနှယျကို လှမျးမိုးဖကျြစီးတတျသညျ့ ဂေါတွဘူကို ဆငျခွငျ သုံးသပျ ကွကုနျ၏။
သကဒါဂါမိမဂျ၊ အနာဂါမိမဂျ၏ရှေ့ ကိလသောမှဖွူစငျခွငျး ဝေါဒါနျကို ဆငျခွငျသုံးသပျ ကွကုနျ၏။
သက်ေခာ မဂ်ဂါ ဝုဋ်ဌဟိတှာ မဂ်ဂံ ပစ်စဝက်ေခန်တိ၊
ကငျြ့ဆဲဖွဈသော အရိယာ သက်ေခာပုဂ်ဂိုလျတို့သညျ မိမိတို့ဆိုငျရာ သောတာပတ်တိမဂျ၊ သကဒါဂါမိမဂျ၊ အနာဂါမိမဂျမှ ထမွောကျ၍ မိမိဆိုငျရာဆိုငျရာ မဂျကို ပစ်စဝက်ေခန်တိ ဆငျခွငျ သုံးသပျကွ၏။
သက်ေခာ ဝါ ပုထုဇ်ဇနာ ဝါ ကုသလံ အနိစ်စတော ဒုက်ခတော အနတ်တတော ဝိပဿန်တိ၊
ကငျြ့ဆဲဖွဈသော သက်ေခာ ပုဂ်ဂိုလျတို့သညျလညျးကောငျး၊ ပုထုဇဉျယောဂီ ပုဂ်ဂိုလျတို့သညျ လညျး ကောငျး၊ ကုသိုလျတရားကို မမွဲအနိစ်စ၊ ဆငျးရဲဒုက်ခ၊ အစိုးမရ အနတ်တဟု ဝိပဿနာရှုကွ၏။
စတေောပရိယဉာ‌ဏနေ ကုသလစိတ်တသမင်ျဂိဿ စိတ်တံ ဇာနန်တိ။
သူတဈပါး၏စိတျကို သိနိုငျစှမျးသော စတေောပရိယအဘိညာဉျဖွငျ့ ကုသိုလျစိတျနှငျ့ ပွညျ့စုံသော ပုဂ်ဂိုလျ၏စိတျကို သိကွကုနျ၏။
အာကာသာနဉ်စာယတနကုသလံ ဝိညာဏဉ်စာယတနကုသလဿ အာရမ်မဏပစ်စယနေ ပစ်စယော။
ဤဘဝ၊ ရှေးဘ၀ မိမိအဇ်ဈတ်တသန်တာနျ၌ ဖွဈဖူးသော အာကာသကသိုဏျးကို ရှုပှား၍ ရရှိသော အာကာသာနဉ်စာယတန ကုသိုလျစိတျသညျ ဖွဈပျေါဆဲ ဝိညာဏဉ်စာယတနကုသိုလျစိတျအား အာရမ်မဏပစ်စယသတ်တိဖွငျ့ ကြေးဇူးပွု၏။
အာကိဉ်စညာယတနကုသလံ နဝေသညာနာသညာယတနကုသလဿ အာရမ်မဏပစ်စယနေ ပစ်စယော။
ဤဘဝ၊ ရှေးဘ၀ မိမိသန်တာနျ၌ ဖွဈဖူးသော မရှိပညတျ နတ်ထိဘောပညတျကို အာရုံပွု၍ ဖွဈသော အာကိဉ်စညာယတန ကုသိုလျစိတျသညျ အမှတျသညာ ရှိသညျလညျးမဟုတျ၊ မရှိသညျလညျး မဟုတျဟု သိစှမျးနိုငျသော နဝေသညာနာသညာယတန ကုသိုလျစိတျအား အာရမ်မဏပစ်စယ သတ်တိဖွငျ့ ကြေးဇူးပွု၏။
ကုသလာ ခန်ဓာ ဣဒ်ဓိဝိဓဉာဏဿ စတေောပရိယဉာဏဿ ပုဗ်ဗနေိဝါသာနုဿတိဉာဏဿ ယထာကမ်မူပဂဉာဏဿ အနာဂတံသဉာဏဿ အာရမ်မဏပစ်စယနေ ပစ်စယော။
ကုသိုလျဖွဈသော နာမျခန်ဓာတို့သညျ တနျခိုးအမြိုးကို ဖနျဆငျးနိုငျစှမျးသော ဣဒ်ဓိဝိဓဉာဏျအား လညျးကောငျး၊ သူတဈပါးစိတျကို သိနိုငျစှမျးသော စတေောပရိယဉာဏျအားလညျးကောငျး၊ ဖွဈခဲ့ ဖူးပွီးသော ဘဝအဆကျဆကျကို သိနိုငျစှမျးသော ပုဗ်ဗနေိဝါသာနုဿတိဉာဏျအားလညျးကောငျး၊ ပွုခဲ့ပွီးသော ကံအမြိုးမြိုးကို သိနိုငျစှမျးသော ယထာကမ်မူပဂဉာဏျအားလညျးကောငျး၊ နောငျ အနာဂတျ၌ ဖွဈနိုငျသညျတို့ကို သိနိုငျစှမျးသော အနာဂတံသဉာဏျအားလညျးကောငျး အာရမ်မဏ ပစ်စယသတ်တိဖွငျ့ ကြေးဇူးပွုသညျ။
၄၀၅။ ကုသလော ဓမ်မော အကုသလဿ ဓမ်မဿ အာရမ်မဏပစ်စယနေ ပစ်စယော။ (ကု၊ အကု-၂)
ကုသိုလျတရားသညျ အကုသိုလျတရားအား အာရမ်မဏပစ်စယသတ်တိဖွငျ့ ကြေးဇူးပွု၏။
ဒါနံ ဒတှာ သီလံ သမာဒိယိတှာ ဥပေါသထကမ်မံ ကတှာ တံ အဿာဒတေိ အဘိနန်ဒတိ၊ တံ အာရဗ်ဘ ရာဂေါ ဥပ်ပဇ်ဇတိ၊ ဒိဋ်ဌိ ဥပ်ပဇ်ဇတိ၊ ဝိစိကိစ်ဆာ ဥပ်ပဇ်ဇတိ၊ ဥဒ်ဓစ်စံ ဥပ်ပဇ်ဇတိ၊ ဒေါမနဿံ ဥပ်ပဇ်ဇတိ။
အလှူဒါနကိုပေး၍၊ သီလဆောကျတညျ၍၊ ရှဈပါးသောဥပုသျသီလကို ဆောကျတညျ၍ ထိုထိုဒါန၊ သီလနှငျ့ ရှဈပါးသောဥပုသျသီလဟူသော ကာမာဝစရကုသိုလျတို့ကို အဿာဒတေိ သာယာ မွတျနိုး၏၊ အဘိနန်ဒတိ အလှနျ နှဈသကျ ကွညျနူး၏၊ ထို သာယာ မွတျနိုး နှဈသကျ ကွညျနူးမှုကို အာရုံပွု၍ စှဲလမျးကပျငွိမှုရာဂ ဖွဈပျေါလာ၏၊ အယူလှဲမှားမှုဒိဋ်ဌိ ဖွဈပျေါလာ၏၊ ယုံမှားသံသယ ဝိစိကိစ်ဆာဖွဈပျေါ လာ၏၊ စိတျပြံ့လှငျ့ခွငျး ဥဒ်ဓစ်စဖွဈပျေါလာ၏၊ စိတျနှလုံး မသာယာခွငျး ဒေါမနဿ ဖွဈပျေါလာ၏။
ပုဗ်ဗေ သုစိဏ်ဏာနိ အဿာဒတေိ အဘိနန်ဒတိ၊ တံ အာရဗ်ဘ ရာဂေါ ဥပ်ပဇ်ဇတိ၊ ဒိဋ်ဌိ ဥပ်ပဇ်ဇတိ၊ ဝိစိကိစ်ဆာ ဥပ်ပဇ်ဇတိ၊ ဥဒ်ဓစ်စံ ဥပ်ပဇ်ဇတိ၊ ဒေါမနဿံ ဥပ်ပဇ်ဇတိ။
ရှေး၌ ကောငျးစှာ လကေ့ကျြပွုလုပျခဲ့ပွီးကုနျသော ထိုထိုဒါန၊ သီလနှငျ့ ရှဈပါးသော ဥပုသျသီလ ဟူသော ကာမာဝစရကုသိုလျတို့ကို သာယာမွတျနိုး၏၊ အလှနျ နှဈသကျ ကွညျနူး၏၊ ထိုသာယာ မွတျနိုး နှဈသကျကွညျနူးမှုကို အာရုံပွု၍ စှဲလမျးကပျငွိမှုရာဂ ဖွဈပျေါလာ၏၊ အယူလှဲမှားမှုဒိဋ်ဌိ ဖွဈ ပျေါလာ၏။ ယုံမှားသံသယဝိစိကိစ်ဆာ ဖွဈပျေါလာ၏၊ စိတျနှလုံးမသာယာမှု ဒေါမနဿ ဖွဈပျေါလာ၏။
(ခ-၁) အဿာဒတေိ၊ အဘိနန်ဒတိ ဟူသညျ ရာဂနှငျ့ယှဉျပါက အနုစား သာယာနှဈသကျမှုမြှသာ ဖွဈသေးသဖွငျ့ အဿာဒတေိ အဘိနန်ဒတိကို မတားဆီးနိုငျမှသာ ]တံ အာရဗ်ဘ ရာဂေါ ဥပ်ပဇ်ဇတိ} ရာဂအထိ ဖွဈကွောငျးကို ပဋ်ဌာနျး သိပ်ပံဆရာတျောကွီးက ဥပမာဖွငျ့ မိနျ့တျောမူပါသညျ။
(ခ-၂) မီးပွငျးတိုကျထားသညျ့ သံဒယျအိုးအလှတျထဲကို အသားတုံးတဈတုံး ပဈထညျ့လိုကျပါက ရှဲကနဲအသံကွားရပွီး အိုးနှငျ့အသားတုံး ကပျ၍သှားပါမညျ။ ထိုအသားတုံးကို သံယောကျမနှငျ့ ထိုးခှါလြှငျပငျ မရနိုငျတော့ပေ။ ဤဥပမာအတိုငျးပငျ အာရုံကို သာယာနှဈသကျပါက မစှနျ့နိုငျ၊ မခှါနိုငျ ဖွဈလာတော့၏။
(ခ-၃) ရူပါရုံအဆငျး၌လညျး တူတူ၊ သဒ်ဒါရုံ အသံ၌လညျး တူတူ၊ ဂန်ဓာရုံအနံ့၌လညျး တူတူ၊ ရသာရုံ အရသာ၌လညျး တူတူ၊ ဖောဋ်ဌဗ်ဗာရုံ အထိအတှအေ့ာရုံ၌လညျး တူတူ ကပျသှားလြှငျ ခှါ၍မရတော့ပေ။ ထို့ကွောငျ့ ]အဿာဒတေိ အဘိနန်ဒတိ တံ အာရဗ်ဘ ရာဂေါ ဥပ်ပဇ်ဇတိ} ဖွဈလာပါသညျ။
ဈာနာ ဝုဋ်ဌဟိတှာ ဈာနံ အဿာဒတေိ အဘိနန်ဒတိ၊ တံ အာရဗ်ဘ ရာဂေါ ဥပ်ပဇ်ဇတိ၊ ဒိဋ်ဌိ ဥပ်ပဇ်ဇတိ၊ ဝိစိကိစ်ဆာ ဥပ်ပဇ်ဇတိ၊ ဥဒ်ဓစ်စံ ဥပ်ပဇ်ဇတိ။ ဈာနေ ပရိဟီနေ ဝိပ်ပဋိသာရိဿ ဒေါမနဿံ ဥပ်ပဇ်ဇတိ။
လောကီ ကုသိုလျဈာနျဝငျစားခွငျးမှထ၍ ယငျးဈာနျကို အဿာဒတေိ သာယာမွတျနိုး၏၊ အဘိနန်ဒတိ အလှနျ နှဈသကျ၏၊ ထိုသို့ သာယာ မွတျနိုး နှဈသကျမှုကို အာရုံပွု၍ စှဲလမျးကပျငွိမှုရာဂ ဖွဈ၏။အယူလှဲမှားမှုဒိဋ်ဌိ ဖွဈ၏၊ ယုံမှားသံသယ ဝိစိကိစ်ဆာဖွဈပျေါလာ၏၊ စိတျပြံ့လှငျ့မှု ဥဒ်ဓစ်စဖွဈ၏၊ ဈာနျ လြှောကခြွငျးကွောငျ့ စိတျနှလုံးမသာယာမှု ဝိပ်ပဋိသာရိဿ ဒေါမနဿဖွဈ၏။